Subject: Oromoo rakko keessa ba'uu Mari'achuun kara tokko irra adeemuu qabna
Haalii keessa jiru gadisisa fi yaadeesadha. Diini keenya yeeroo cimmaa jiruu kanati Oromoon amoo laffacha adeemun diina tumsudha. Ijjooleen Oromoo kayyoo isaati cimmani haga dhummati dhabachuu kan dadhabaa jiraanf Wayee Oromummaa fi Bilisummaa hubannno isaani cimma akka hin tane mulisa. Ijoolee Oromoo Qbsoo keessa turan heedu dha isaan keessa dhaabba Habasha hunda keessa galuun warii seena isaan baleessan fi Oromoo xiqeesan jiru. Kan amoo akka Ibsa Gutama, Abiyuu Galata kkf Kayyoo ganama egalan hanga harati utuu hin jijirin warii duka jiran jiru, sababin isaa Wayee Oromummaa fi Bilisummaa hubannoo Cimma qabachuu isaanti.
Uumataa Oromoo Bilisa basuu yoo barbanee dura of bilisummaa basuu qabna. Of bilisoomsuun amoo Oromummaa Qama keenya goodhachudha. Amanta Faranjii fi Amanta Arba leelisuu irra of bilisumsuu, Habasha diina keenya yeero hunda ta'uu isaan damaqani beekuu, ganduma irra of bilisoomsun QBO kayyoo dhuga wagaa 40 itti lubu waregene fi feedhi fi hawwii saba Oromoo Bilisumaaf yoo murtefanee qoofadha. Namoon Dhaaba siyyasaa akka hucuu jijirtan fi amanta leelisan namoota yeero hunda ijjnnoo hin qabne fi dhumma irrati gantuu fi ergamtuu diina ta'uu. Mee Bartota 60 kessan wara QBO oromo irrati hirmatan seena isaan qooradha. Waari Oromummaa qama goodhachuu dadhaban yeeroo hunda dhaabba jijiratuu, Habasha jala adeemuu, Habasha waliin waqeefatuu, Mazigida Habashati salatuu achii dhufan amoo wayee Oromoo adeesuu, Dhiga Yeesusuun tokko taneera jeedhan Tigire waliin Jilbeenfatuu, Obboleen Musilima jeedhan Gurage dubsan Oromoo dhigga isaan amoo huduu qaba jeedhan harka qabuu lagatuu.
Lafa karemetri 250 fi Ticketa Xiyyara 40% rakkasha argachuuf jeecha diasporan Embassy TPLF jala kan hiriruu dandayee Oromummaa isaa QBO gegesa jira irrati hubannoo cimmaa akka hin qabne muliisa kun siirti irrati mariatamuu qaba.
Nami Lammi isaa Bilsisoomsuuf wareegama lubu kafaluuf deemu dura waan kana irra of bilisomsuu qaba. Embbasy Ethiopia keessati shubisa bulan Haawwasa Oromoo ijara jeechun of sobuu ta'aa. Utuu kana wal barsisfne wal amane Orumummaaf dursa hin latiin diiree qabsoo waliin deemun bala isaati bu'aa isaa irra caalaa. Utuu Oromoon Million 50 jiru Tigiren lafa Naannoo Finfinne Km 1, 100,000 humana lammi keenya irra buqiftee fudhatee yeero isheen lammi Tigirayf qooduu caalifnee ilaalun matuma uni irra hin egamuu, kanaafuu Dhabbileen Oromoo, Hayuuleen Oromoo, jarsoolin Oromoo fi medialeen Oromoo hundi bakka jiranti tele confrence goochun mariin hawwasa hirmachise bakka hunda fi medialee Oromoo hunda gegefamee murte tokko irra ga’amuu qaba.
Rakkoo kun utuu jiru akka hin jiree goochuu of sobu dha, rakkoo kana utuu beeknuuu dubachuu sodachuun caalisun amoo QBO oromoo akka diigamuu fi diina keenya akka cimuu fi gabatuu goochuu dha. Kanaafu haqa jiruu irrati Marianee gara irrati walii galee irrati lucoofnee QBO shafsisuu qabna. Dhaabaa hin jiree maqa lachuun arara jeechuun qabsoo burjajeesuu irra warii kayyoo ABO ganama qoophese fi BIlisummaa Oromoo irrati wal galee qabsoo qoofa irrati xiyyefachuu qabna.
Dhimmaa kana irrati QBO bilisumma Oromoo fi warii Bilisummaa Oromoo barbadan Marii Media Oromoo irrati Gegesuuf mariachaa jiru, Marii kun Media Oromoo TV fi Redio Oromoon akka uumataaf darbuu ta'aa. TV SBO, TV Toronto, TV. Minisota fi OMN akkasumasii Redion fi Websiten Oromoo Gazeexesitoon Oromoo kan Irrati Argaman yamuu ta'uu Mangudoon QBO irra turan fi jiran warii Akka Abiyuu Galata, Ibsa Gutama, Galasa Dilbo, Ahimad Hussen, Mulugeta Mosisa, Abara Waqijira, Dr. Tadase Eba kkf akka saganta kana irrati hirmatantu yaadama. Saganta kana Prof. Asafa Jalata, Prof. Mohammad Hassan, Prof. Mekuria Bulcha akka gegesan egama. Galliin Marii kana QBO degeruu hundi Amanta leelisuu fi Ganduman deemuu irra of Bilisoomsun Oromummaa jalati hirirudha QBO tokkoman Jaluma fi Amala waraqa masakamudha. QBO lubun Meeqaa itti wareegamee akka harka diinati hin kufnee goochuuf.
Qindeesitoona fi gorsitoota:
Dhimma kana irrati dursine TV fi Redion isiin waliin marii goona: ergasi booda: Dhimma kana Mediale Oromootu Qoophesaa: Median Oromoo hundi wal tatan qoophesitu Gummin Paarlamaa Oromoo yaada framework qoofa qoophesu fi marii kun maliif akka barbachisee fi bu'aan isaaf yaada murte xumura isiin waliin qoophes uumatati dhiyeesudha. Barii kun bara haqan hojeechuu hafee Tefozon wal farasun bayatee wa’aan ta’ee hundi akka hirati hirmatuuf hundumaf email ergame jira. Yaadi garii kun kara keenya akka hoji irra hin olee kan bardan yoo jiratan ilee ofuma isaanti irrati hojeechuu ni danda’uu garuu amoo Oromoo hunda kan hirmachisee fi Oromoo hundi akka dhaga’ee irra baratuu goochuu qabu, Nami keenya yeerro yaada garii burqisifnuu nu harkatii erga doomsee booda ji’aa 6 booda amoo of isaaf maqa ishee jijire Tefozo ijaratee hojeechuuf yaala, garuu waan hunda hin hirimachifne fi waan gara keessa itti hin yaadamin bu’aa hin fiduu.Kanaafu Marii jeechuun kan hunda hirmachisee ta'uu qaba.
1. Said Ali, TV Minnesota
2. Garbii Nuuree TV Toronto
3. Abdi Fite OMN
4. Malkamu SBO irra
5. Bakka bu’oota Redio fi Website Oromoo
6. Artistoon Oromoo irrati hirmatuu
Warii Marikana gegeesan adeemsa kana yaada isaa luceesan:-
1. Prof. Asafa Jalata
2. Prof. Mohamad Hassan
3. Prof. Mekuria Bulcha
4. Luba Bantii Ujuluu
Mangudoon Nu gorsan fi tajabani amoo
1. Obbo Abiyuu Galata
2. Obbo Ibsa Gutama
3. Obbo Ahimd Husen
4. Obbo Abara Waqijra
5. Obbo Mulugeta Mosisa
6. Obbo Galasa Dilbo
7. Prof. Kuyee Kumsa
8. Addee Asili Oromoo
9. Adee Namat Isaa
10. Obbo Daneal Dafa
11. Dr. Abera Tefara
12. Obbo Makonnon Galaaniin,
13. Obbo Fiqruu Kabbadaa
14. Obbo Alamaayyoo Taarraqaa
Abooti Amanta Hunda Waqeefata, Isilma fi Kirstiana Oromoo bakka bu'oota Akka irrati argaman goona.
Kana booda wayee Qabsoo gaafa yeero arganuu hojeechuu utuu hin tanee sa"a 24 hojeechun guyya hunda qabsooti irrat argamudha.Warii yaada adda ykn yaada dabalata qabdan Tessoo kana gadiin yaada keessan nuuf erga.
Parliamentarian, Federal Democratic Republic of Ethiopia and Chairman of the Oromo Parliamentarians Council